Madaxwaynaha Iyo Madaxweyne Xigeenka Somalinad Oo Kulan La Yeeshay Wefti Ka Socday Dalka Qatar | Salaan Media
Madaxwaynaha Iyo Madaxweyne Xigeenka Somalinad Oo Kulan La Yeeshay Wefti Ka Socday Dalka Qatar
May 7, 2013 Hargeysa(SM) – Madaxwaynaha iyo Madaxwayne Xigeenka Somalinad, Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) iyo Md. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici), ayaa maanta qasriga madaxtooyada kulan kula yeeshay wefti balaadhan oo ka socday dalka Qatar, kulankan ayaa lagaga hadlayay sidii dawlada dalka Qatar mashaariic horumarineed uga fulin lahayd Somaliland.
Weftigan oo maanta dalka soo gaadhay ayaa waxa madaarka ku soo dhaweeyay Wasiirka Wasaaradda Diinta iyo Aw-qaafta Sh.khaliil Cabdilaahi iyo Wasiirka Wasaaradda Duulista, Hawada Maxamuud Xaashi Cabdi.
Wasiirka Wasaaradda Diinta oo markii weftigu soo dageen madaarka kula hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay ujeedada weftigu ay u yimaadeen Somaliland, waxaanu tilmamay inay mashaariic horumarineed oo ay dalka ka hirgaliyeen ay furayaan waxaana ka mid ahaa haladii Wasiirka. ”Waa wefti ka kooban saddex masuul oo ka socda mid ka mid ah hay’addaha ugu qanisan dalka Qatar oo walaalaheen ah oo dalka u yimi inay indho-indheeyaan mashaariic badan oo ay dalka ka hirgaliyeena xadhigana ka jaraan, maalgalintaasi ay dalka ka samaynayaan oo wax wayn ka tari doonta horumarinta adeegyada bulshada, isla markaana xoojin doonta xidhiidhka labada dal ka dhaxeeya.”
Weftiga ka socday dalka Qatar, ayaa ka mahad celiyay sida fiican ee loogu soo dhaweeyay dalka Somaliland, waxaanay ballan-qaadeen inay sii wadi doonaan mashaariicda horumarineed ee dhinacyada dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka iyo biyaha ee ay ka hirgalinayaan Somaliland, waxaanay weftigu la kulmeen madaxda ugu sareysa dalka.